» Manni hidhaa tokko yoo diigame malee deebi’anii keessatti hidhamuun hin hafu ---- Gadaa.com Oduu – News
Ebla/April 2, 2013 · Gadaa.com Abdii Boruutiin*
Maarree, namni waayee mana hidhaa tokkoo beeku, manni hidhaa kan biraa tokko fooyya’ees kan ijaaramu yoo ta’e, warra hidhamuuf jijjiirama akka hin qabne akkamitti hubachuu dagata? Ani akkan ilaalu fi yaadutti, impaayarri Itoophiyaa tun sirna ishii diiguu qofaa otuu hin taane, sirnas ta’ee teessoodhumti ishiituu hundeedhaan yoo diigame malee sabootni achi keessa jiran bilisummaa dhugaa waan argatan natti hin fakkaatu. Uummatni biyya ofii keessatti tuffatamaa; qabeenyi isaa saamamaa; ijoolleen isaa hidhamaa, dararamaa, ajjeefamaa waggaa dhibba tokkoo ol gadi-aantummaa keessa jiraachaa ture fi jirus, akkamitti lammii biyyattii dhiigaan ijaaramte tanaa ta’ee jiraachuu danda’a? Akkamitti eenyummaa ofii dhiisee kan namni biraa ittimaxxansuuf deemu fudhata? Uummatni Oromoo kan har’allee jaarraa 21ffaa keessatti biyya ofii keessatti dararamaa jiru waan irra gaye fi gayaa jirus hundaa hirraanfatee; Oromummaa dhiisee Itoophiyummaa ni fudhata jedhanii yaaduun gamnummaa dha moo ofis uummatas gowwoomsuu dhaa? Har’a yeroo Oromummaa fi Sabboonummaan guddachaa dhufan kanatti uummata keenyaan kana sii wayya jchuun booddeen isa maala akka ta’u hubatuu?
Warri bilisummaa sabootaatiif qabsoofna jedhanii asii fi achi fiigan, beekaniituma xiiqiidhaan yookaanis aangoo qabachuuf hojii sabootaaf jijjiirama hin fidne kan dalagan yoo ta’e malee, dhugumatti manni hidhaa kun otuu hin diigamne sabootni achi keessa jiran bilisa bayuu hin danda’an. Karaa tokkoon, natu sii beeka fi si bulchaan algaa uummata Oromoorraa hafuu qaba jechaa; karaa biraatiin garuu kan siif ta’u nutu beeka; kana siif wayyaa isa fudhadhu jechuun waan walfaallessuu dha. Hiree ofii kan murteeffatu uummaticha bal’aa dha malee, namni tokkooyyuu murteessufii hin danda’u. Ana kan naaf hin galle, warri Itoophiyaa diimookraatessinee; achi keessatti mirgi uummata Oromoo kabajamuu danda’a jedhan, filannoo kana uummata bal’aa Oromoo gaafataniiti moo akkuman duraan jedhe nutu siif murteessa jechuufii? Oromummaa yookaanis lammii Oromiyaa dhiisiitii Itoophiyummaa fudhadhu jechuun isaanii dammaqinsa uummata keenyaa tuffachuu hin fakkaatuu? Sadarkaa bilchinni Oromummaa fi Sabboonummaa har’a irra gaye wallaalaniiti moo numatu beekaa dha, numatu waa siif godhuu danda’a jechuudhaan oftulummaa agarsiisuu dhaa?
Jaarmayootni Oromoo, kan duraan ijaaramanii jiranis ta’ee kan yeroo ammaa haaraa labsame, kan impaayarittii tana diimookraatessinee bilisummaa Oromoo fidna jedhan, hunduu sadarkaa Sabboonummaa uummata keenyaa keessumaayuu kan dhaloota haaraa (dhaloota Qubee) waan hubatan natti hin fakkaatu. Keessumaayuu warri biyya alaa jiran hammuma uummata bal’aa Oromoorraa fagaatanii jiran sana, sammuudhuma bar-kurnee lama duraatiin waan yaadan fakkaatu. Dammaqinsi uummata keenyaa fi guddinni Oromummaa achuma dhaabbatee baakkeedhuma dur sanatti hin hafne. Yaadni fi ilaalchi uummatni keenya qabu kan biraa ti. Har’a warri baratan hafanii kan barumsa hin qabnellee, qonnaan bultootni Oromoollee waan isaan yaadani fi dubbatan baay’ee nama dinqa. Jaarmayaa amma haaraa labsame Adda Diimookraatawa Oromoo (ADO) ilaalchisee, akka yaada fi ilaalcha kiyyaatitti, kun har’a otuu hin taane otuu bara 1991 dura ijaaramee turee, tarii sammuu namootaa jijjiiruu danda’a ture. Har’a laafullee kan sammuu fi onnee Oromoo keessa jiru ABO qofaa dha jedheen amana. Har’a uummatni keenya kan barbaadus akka mooraan QBO cimu malee jaarmayaa haaraan akka ijaaramuu miti.
Akkuman kanaan duras irra deddeebi’ee ibsaa ture, abbaan fedhe karaa itti amanuu fi danda’uun qabsaayee uummata keenya gabrummaa jalaa baasuu kan danda’u yoo ta’e ani akka ilma Oromoo tokkootti kanarraa rakkoo hin qabu. Karaa itti amanuun yoon jedhu garuu tooftaa fi tarsiimoo barbaadutti fayyadamee qabsoo kana cimsuu ni danda’a jechuu kooti malee kaayyoon gootonni keenya itti wareegamaniif dagatamee projektiin hin milkoofne haa yaalamu jechuu kiyyaa miti. Itoophiyaa diimookraatessuu jechuun mana hidhaa jiru diiganii kan biraa haaraa ijaaruu jechuu dha. Hidhamtootaaf (sabootaaf) garuu, hanga walaba ta’anii, waan ofiif barbaadan sana hiree ofii ofumaan murteeffachuu hin dandeenyetti; hanga waan siif ta’u nutu siif beeka jedhanii isaaniif murteessuun yaalamutti; wanti jijjiiramu waan argamu natti hin fakkaatu. Kun ilaalcha fi amantaa kiyya dha. Haa ta’u malee, ammas gaafiin kiyya: Warri Itoophiyaa diimookraatessinee bilisummaa Oromoo argamsiisuu dandeenya jedhan, kaayyoo kana walsaamuu dhiisanii; erga maqaa Oromootiin ijaaramanii fi socha’anitti humna, qabeenya fi dandeettii gara gara hiruurra; humnootni Oromoo ilaacha tokko qaban akka jabaatan maaliif tokkummaa kaayyoo hin ijaarre? kan jedhu dha.
Gaafii walfgakkaataan kun warra walabummaa Oromiyaatiif qabsoofna jedhanis ni ilaala. Isaaniis taanan akkasuma gara garatti hiramanii humna ofii dadhabsiisuurra maaliif tokkummaa kaayyoo hin uumne? Maqaadhuma bareedaa uummatni Oromoo jaalatu qabatanii jijjiirama tokko otuu hin fidin taa’uun isaaniifis ta’ee uummata keenyaaf bu’aan argamu hin jiru. Kanaaf, tokkummaan kaayyoo gama hundaanuu barbaachisaa dha. Yoo kun hin taane; yoo jijjiiramni tokko hin mul’ane, ammasa gara fuulduraatti gareeleen ykn jaarmayootni haaraan uumamuun isaanii waan dhaabbatuu miti. Kun ammoo uummata keenyaaf afaanfaajjii guddaa uuma. Jaarmayaan tokko hojiidhaan kan biraa caalee argamuun barbaachisaa dha; garuu akkuma makmaaksi Oromoo “Namni mana tokko ijaaru citaa wal hin saamu” jedhu, kaayyoo qabanis walsaamuun bu’aa hin qabu. Waan waliin ijaaruu barbaadan sana yoo tumsa waliif ta’anii walumaan ijaaran xumuruu danda’u.
Dhumarratti, jaarmayaa haaraa ijaarame ADO ilaalchisee, gaafii fi deebii Radio Marii Obboo Leencoo Lataa waliin godhe dhaggeeffadheen wanti tokko na dinqe. Akka ilaalcha kiyyaatitti, deebii Obboo Leencoon gaafiilee dhiyaataniif kennan dhugumatti quubsaa miti. Kan nama dinqu dubbii waliin dhayuu isaanii ti. Walabummaan Oromiyaa barbaachisaa miti jechuuf aggaamanii; deebi’anii ofqusachuudhaan “dirqii miti” jechuun ejjannoo sirrii ta’e hin agarsiisu. Erga hin oollee, erga Itoophiyaa diimookraatessuun kaayyoo ifaa isaanii ta’ee, maaliif guutumaa guututti barbaachisaa miti jechuu sodaatan? Ofqusachuu maaltu fide? Warra har’a miseensota Koree Hojii Raawwachiistuu jedhamanii ramadaman keessa warri kanaan dura Adda Walabummaa Oromiyaa (AWO) jedhanii jaarmayaa ofii dhaabbatanii turan, ilaacha fi kaayyoo sana hundaa dhiisaniiti walabummaan Oromiyaa hin barbaachisu ykn dirqii miti jedhuu? “Buddeenni gaariin eeleerratti beekama” jedha Oromoon. Walabummaan Oromiyaa haa hafuu, mee uummata keenyaa gabrummaa jalaa baasuu kan danda’an yoo ta’e, jabaadhaa Waaqni isin haa gargaaru jechuun barbaada. Garuu manni hidhaa tokko akkuma jiruitti yoo diigame malee, haaromees yoo ijaarame deebi’anii keessatti hidhamuun waan oolu natti hin fakkaatu.
5 Comments	Mortar said,
April 2, 2013 @ 9:31 pm
Waanti amma adeemaa jiru ummata baay’ee afaan faajjessuutti jira. Miidiyaaleen Oromoo jaabatanii hojjechuun dhaabbileen siyaasas haga dandaa’ameetti walitti makamuun humna ummata Oromoow alitti fiduun jabeesuu qabu.
April 3, 2013 @ 12:10 am
Obbo Abdii, galatoomi.
Worri ADO ofiin jedhan osoo dhugaa kana beekanuu ummata Keenan afaanfaajjessuu barbaadu moo mana hidhaa moofaa diiganii haarawaa ijaaruuf deeemuu? Yaa rabbi kun ajaa’iba!!!!!!!
April 3, 2013 @ 7:13 am
WARRI SABA OROMOO HINTA’IIN GARUU IMMOO AFAAN OROMOO BEEKAN OPDO’N CAALATTI ISAANIIF BIFA TOLUU DANDA’UUN AKKA HAARAATTI IJAARRACHUUF SOCHII CIMAA GOCHAA JIRU. MISEENSOTA HAARAA FUNAANNACHUU EEGALANIIRU. OROMOON BAKKA JIRU HUNDUMAATTI KARAA HUNDUMAA OF IJAAREE AKKA DHAHII/DALLAA/AXIRII IJAARAMEE KARAA JARRI NU LIXUU DANDEESSU HUNDA CUFUU QABA.
April 3, 2013 @ 9:46 pm
Obbo Abdioi Boruu,
Gumaachaa yaroo dheeraaf godhaa jirtuuf galatoomi. Barreefamni kee dhugumatti barumsa guddaa namaaf kennu. Obbo Obsaa, atis yaada keetiif galatoomi. Oromoon baayyee dammaqinsa guddaadhaan of eeguu qaba.
April 7, 2013 @ 2:03 pm
Obbo Abdii boruu
dhugumatti galatoom yaada badhaa fi barbaachisaa tahe kana dhiyeessuu keetiif. Akkuma atuu jette mana hidhaa tokkorraa gara isa birotti jijjiiruun yoma haaromfamellee gatii hin qabu. Saboonni gara garaa kan mirgi isaanii dhiitamaa ture, afaan fi aadaan isaanii ukkamfamee, qabeenyi isaanii barootaaf saamamaa ture kan YUGOSLAVIA- GUDDOO keessa jiratan, kan mirga abbaa-biyyummaa isaani goofatani gaafa mallattoo hacuuccaa tan taate Yugoslavian bittinloofte (disintegrate) taaten booda.
Garuu saboonni Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, the Republic of Macedonia, Montenegro, Kosovo fi Vojvodina – kan hardha hiree ufii ufiin murteeffatan biyya tahan qabsaayanii ,aarsaa kaffalanii duguggaa-sanyii ballessuulle keessa darbaniiti malee koottu fudhu aangoo ykn wolabummaa jedhamaniiti miti. Akka Ameerikaanonni jedhan ” FREEDOM IS NOT FREE”.woyyaanonni karaa nagayaatiin dorgommii filannootiin saba fi sablammii hacuucutti jirtuuf mirga kenniti jechanii eeguun isa mammaaka abbootiin teenya, SAREEN GOWWAAN DAMMA KAJEELA – jedhan natti fakkaata.addunyaa kanarratti qabsoo hidhannaa malee sabni mirga isaa goonfate hin jiru. ANC fi Nelson Mandela lee bari bombii iddoo adda addaatitti dhukaasanii,diina isaanii sodaa itti buusaniiti malee akkanumaan hin turre. Gaafa humni hidhate tokko oromiyaa keessatti humna diina teessoo fi nagaa dhoogge, dinni oromiyaa keessa sochohu tokko akka lafuma ejjatee irra deemu tanallee sodate dhufa bilisummaan. gaafa sani diinni keenna xinnaachaa, firri keenna baay’ataa adeema. Addunyaa tana irratti yoo sabni tokko ka’ee mirga ufiitiif hinfalmanne, ka alaa dhufee bilisa isa baasu hin jiru.
Dhugumatti oromoon biyya lafaa kana irratti miga rabbiin uumaan isaa kenne ,nama akka isaa foon ufateen dhabe kana cadhiseetuma ijaan ilaala, mootummaa waaqaa ( jaannata rabbii) isa ijaan argee hinjenne argadha jechuun soba guddaa dha.
Amantii Islaamaa fi kristaanaa irrattuu (toorat, zabuur, injil fi Kuran) namani mirgaa fi haqa isaatiif hin lolle gatii nabiratti hinqabu jedha.
yaa Saba kiyya woyyaanee eenyummaa keenna afaan qawweetiin nurra fudhatte afaan qawweetiin dura haa falminuu. gaafa haala saniin nuti jajjabaanne woyyaaneen ufuma isiitiif nagaa buufna jettee nu kadhatti.
Mee riphee lolaa Afghanistan keessaa laala, adha America ni nagaa buufna jettee kadhatti. dhuma irratti ODF jijjiirama saba keenyaaf buhaa buusuu danda’a taanaan tole garuu… mukni tokko firii isaatiin beekama. akka seenaan addunyaa kanarraa mudhisutti: Filannoo irra , Afaan qawweetitu dafee mootummaa cunqursaa jijjiiruu danda’a. Nama humna qabu ormillee sodaata. HARKI DUWWAAN FUULA HIN IBSU, jedhe oromoo duruu.
yaada qabaannaan Falmataami@gmail.com.